Archive du 20161121
� Grandes surfaces � eto Antananarivo Atahorana hisy hametraka baomba�
Hentitra kokoa ny fisavana any anatin�ireo tranombarotra lehibe na ny antsoina hoe � Grande surface � eto Antananarivo amin�izao fotoana izao.
Mitohy ny fitsidiham-paritra tanterahin�ny filoha teo aloha sady filoha nasionalin�ny antoko Tiako i Madagasikara Marc Ravalomanana.
� Village de la Francophonie � Hisokatra ho an�ny besinimaro
Hotokanana anio alatsinainy 21 novambra tolakandro ny � Village de la Francophonie � etsy Andohatapenaka, ary dia hisokatra ho azon�ny besimaro tsidihina aorian�izay. Vohitry ny kolontsaina sy taozavatra ny � Village de la Francophonie �.
Fandaniana ny tetibola 2017 Miankina amin�ny hita tamin�ity taona ity
Mbola hisy ny fifidianana ny �lal�na fandravonana� hahafahana mitaratra na nandeha araka ny tokony ho izy na tsia ny fandaniana ny tetibolam-panjakana tamin�ity taona ity.
Fiatrehana ny frankofonia Sahiran-tsaina ireo mpampitony
Hanomboka anio dia ho renivohitry ny frankofonia i Madagasikara, hoy ny minisitry ny raharaham-bahiny, Beatrice Atallah, ka aoka hatsahatra hatreo aloha ny adilahy politika rehetra.
Micha�lle Jean Sedra voalohany ho azy ny Frank�f�nia 2016
Eto Madagasikara hatry ny omaly ny Sekretera jeneralin�ny Frank�f�nia, Rtoa Micha�lle Jean, ary tsy hiala eto raha tsy amin�ny 27 novambra 2016 hifaranan�ny fihaonana an-tampony faha-16 ny Frank�f�nia.
Mohammed VI Afrikanina faha-5 manankarena indrindra
Ny Mpanjakan�i Maraoka Mohammed VI no namaky lay ny fahatongavan�ireo olo-manankaja hiatrika ny fihaonana an-tampony faha-16 Frank�f�nia hatao eto Antananarivo ny 22 ka hatramin�ny 27 novambra 2016
Taratasin�i Jean Ataovy tsara e !
Eny ary ry Jean fa dia raikitra izy ity ka tsy mipody koa ! Marina ny anareo hoe raharaham-pirenena no atrehana fa dia aleo aloha mba samy hibanjina an�izay na dia misy aza ny tsy fifanarahana madinidinika e !
Fitokanana lalana frankofonia Vitsy ireo depiote nanotrona
Nampisy resa-be ny fahavitsian�ireo Solombavambahoakan�i Madagasikara tonga nanotrona ny fitokanana ny lalana Frankofonia �Rocade d�Andohatapena� na ilay lalana tafiditra amin�ireo tetikasa �Projet Pr�sidentiel�.
Antananarivo Renivohitra Liana amin�ny fandraharahana ny ankamaroan�ny tanora
Liana amin�ny asa fandraharahana ny ankamaroan�ireo tanora eto an-drenivohitra.
Fanafoanana ny CEPE Tsy mbola ato ho ato, hoy ny minisitra Paul Rabary
Mandeha be ny feo eny anivon�ny fiarahamonina eny, indrindra ny eny ambanivohitra fa hofoanana ato ho ato ny fanadinana CEPE ary hanomboka hampihatra ilay drafi-pampianarana Plan Sectoriel de l��ducation (PSE) ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny.
Kaominina Ambavahaditokana Nofanina amin�ny resaka vonjy voina ny mponina
Anisan�ny kaominina iray ahitana ankizy latsaka anaty lava-biriky na olona maty an-drano hatrany matetika ny kaominina Ambavahaditokana Atsimondrano rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao.
Tokantrano hono tsy hahahaka e!
Ao anatin�ny frankofonia tanteraka isika amin�izao fotoana izao. Ny mpitondra milaza fa tombotsoam-pirenena ny fanatanterahana izany eto amintsika.
Marion Vaovao mampalahelo no nianjady amin�ny mpanakanto Marion. Nodimandry ny sabotsy teo ny rainy niteraka azy noho ny aretina nahazo azy. Izahay eto amin�ny gazety tia tanindrazana dia mirary fiononana feno ho an�ity mpanakanto sangany ity sy ny fia
Ivandry Trano iray misy rihana, nirehitra omaly maraina teny Ivandry akaikin'ny siniben-drano. Namoizana ain�olona ity loza ity.